Aigara achida zvekukwira, saka ndakazomugadzirira size tiri mubath yepaAirport – Vanoda Zvinhu
Musikana wangu aigara achingonzwa kuda kusvirwa everytime. Tainge tichangopedza hedu our college diplomas and we decided kuenda on a holiday trip to Australia. Tasara ne hour rekuenda kuAirport takasvirana and by the time we were boarding ainge akutoda kusvirwa zvakare.
Naturally, we checked out the plane’s bathroom tikaona kuti yainge iri diki kuti tisvirane imomo. Taikagara pa3 seater musikana wangu ainge arikuwindow ini ndainge ndakagara pamiddle seat and the other seat painge pane some Australian dude. Tichigara pasi Patie my girlfriend akabva akumbira a blanket from flight attendant and she covered us both. Patie akaisa ruoko rwake mubhurugwa ndokuburitsa mboro yangu under the blanket akatanga kuibonyora slowly kuti the guy sitting next asawone zvaitika. She whispered in my ear akati nhasi ndinoda kuti utunde chete.
Zvaingotyisa kuti ndakagara nestrangler apa ndainge ndakufemera pamusoro luckly the guy and people around us vainge vakaisa maearphones but I am sure the couple in front of us noticed but havana zvavakataura. Ndakabonyorwa for about 30 mins ndikabva ndatunda. I just smiled ndikaziva kuti I will never forget that day randakabonyorwa in a plane full of people.
The trip became so long apa Patie ainge arohwa nezemo chairo luckily tainge tine connecting flight kuDubai saka as we got there takaenda straight kubathroom we waited kuti vanhu vese vabude in the ladies. Takapinda mutoilet ndikagara paseat painge pasina nguva yeromance Patie akangoigarira ndokutanga kundikoira, she didn’t take long akabva atunda, kaingova kaquickie paAirport while we waited.
Pakasvika flight hedu takapinda hedu tikaenda, this time tainge taneta so takamirira kuti tisvike kuSydney. My cousin was waiting for us, he picked us and patakasvika kumba kwake it was straight to the bathroom. Apa waiwona kuti kaupenyu kachinja takaita kamwe kaQuickie tisati tamhoresana. Takatozobuda mubathroom tasvirana mutub tichigeza.
Next story Kubatwa naThembeka Ndichisvira Shamwari Yake muSwimming Pool
Previous story Takapedzerana na Eddie pa Lodge